क्रिकेट खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने सरकारको निर्णय – हाम्रो ईकोनोमी
क्रिकेट खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने सरकारको निर्णय
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले क्रिकेट खेलाडीहरुलाई जनही ५ लाख दिन सिफारिस गर्ने भएको छ ।खेलाडीहरुको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका सदस्य सचिव केशव विष्टले भने, प्रत्येक खेलाडीलाई ५ लाख दिन भोलि मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव लैजाँदैछु ।’ नेपालले हालै मात्र यूएईसविरुद्ध एकदिवसीय र टी–२० सिरिज जितेको थियो ।
युएई सिरिज जितेको पैसा खेलाडीलाई, ट्रफी होटलमा !
युएईविरुद्ध क्रिकेट सिरिज जितेसँगै नेपाली क्रिकेट टोलीले १० हजार दिराम (करिब ३ लाख रुपैयाँ) नगद पुरस्कार पायो । नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट नगद पुरस्कार जितेको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो ।
नेपालले यसअघि नगद पुरस्कार कहिल्यै नजितेकाले पुरस्कार रकम के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थिएन । तर, अरु देशमा सामान्यतया यस्तो रकम क्रिकेट बोर्डको खातामा जम्मा गरिन्छ । उसले खेलाडीलाई वितरण गर्न वा नगर्न सक्छ । तर, नेपालमा लामो समयदेखि क्रिकेट संघ छैन । त्यसैले यूएईमा जितेको पुरस्कार राशीको स्वामित्व कसको हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठ्छ ।
यस विषयमा हामीले क्यानकी पूर्वसीईओ तथा हाल नेपालका लागि आईसीसीकी प्रतिनिधि भावना घिमिरेलाई सोध्यौं । उनले पुरस्कार राशी खेलाडीलाई दामासायीले वितरण हुने बताइन् । तर, कुन प्रक्रियाबाट कसले वितरण गर्ने भन्नेमा चाहिँ उनी पनि प्रष्ट छैनन् ।
तर, खेलाडीहरु होटलमा नबसेका बेला ती ट्रफीहरु कसको जिम्मामा हुँदा हुन् ? क्यानका पूर्व कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामा भन्छन्, ‘क्यान हुँदाखेरी पनि विदेशबाट आएका ट्रफी सुरुमा होटलमा नै ल्याएर राखिन्थ्यो र त्यसपछि क्यानमा अफिसमा लगिन्थ्यो । अहिले चाहिँ म यसै भन्न सक्दिनँ । सम्भवतः होटलमै राखेर क्यान पुनर्स्थापना भएपछि कार्यालयमा लगिन्छ होला ।’होटलमा राख्दासम्म ट्रफीको सुरक्षा जिम्मेवारी होटल मालिकको नै हुने उनी बताउँछन् ।
क्यानको कार्यालय भवन मुलपानीमा छ । आईसीसीको निलम्बनमा परेपछि सो कार्यालय बन्द अवस्थामा छ । यद्यपि, नेपाली टोलीले पहिले जितेका ट्रफीलगायत अन्य प्रपर्टी अहिले पनि सोही कार्यालयमा रहेको लामा बताउँछन् ।‘सञ्चालनमा नभए पनि एक-दुईजना भाईहरुले कार्यालय रेखदेख गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।
क्यानबिनाको नेपाली क्रिकेट